🥇 Akaụntụ maka ndị ozi ahụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 41
Vidio nke ndekọ ego maka ndị ozi ahụ
Nye iwu ka edee ego maka ndị ozi ahụ
N'ime ọrụ njikwa nke ndị ozi, usoro njikwa na usoro ndekọ ego dị ezigbo mkpa, ebe ọ bụ na a na-eme ha n'ihe metụtara ndị ọrụ ubi - ndị ozi. Nsonaazụ na ogo nke ọrụ enyere dabere na arụmọrụ nke ndị ozi ahụ. Enweghị njikwa kwesịrị ekwesị na-emetụta ogo arụmọrụ na ọsọ nnyefe, nke gosipụtara na nzaghachi na-adịghị mma sitere n'aka ndị ahịa. Na mgbakwunye na njikwa, ọ dị mkpa ịghara ichefu banyere ịza ajụjụ maka ọrụ nke ndị ọrụ ubi. Ihe ndekọ ego maka ndị na-ebu ego na-egosi site na mmezi nke data ndekọ na usoro ọrụ, oge ọrụ, ọnụ ọgụgụ nke iwu, wdg. Omume oge maka ndebanye nke ndị ozi na-enye gị ohere izere ọnọdụ nsogbu na ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ nnyefe, na-enye gị ohere nyochaa arụmọrụ nke onye ozi ọ bụla. Ọrụ ikpeazụ nke ọrụ onye ozi ahụ bụ nnyefe, ya bụ ịnyefe onye ahịa ihe ma ọ bụ ihe, nke nzaghachi ya na-emetụta aha ndị ọrụ ozi ahụ. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya idebe ndekọ nke ndị ahịa, ma nye ndị na-ebu ozi ka ha wee nweta nzaghachi.
Nzaghachi ziri ezi na ọnụ ọgụgụ ndị ahịa nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na mmụba n'ọnụ ọgụgụ ndị ahịa, nke ga-emetụta ọkwa nke ụlọ ọrụ uru na uru. Idebe ihe ndekọ nke ndị ozi ahụ gbagwojuru anya site na saịtị saịtị nke ọrụ ha. The ajụjụ nke ndị ahịa nwere ike ime ka ọtụtụ nsogbu n'ihi na nnukwu eruba nke iwu. Ka ọ dị ugbu a, ahịa nke teknụzụ ọhụrụ na mmemme mmemme na-enye azịza niile enwere ike iji bulie ọrụ nke ụlọ ọrụ. Sistemụ akpaaka na-achọ iji rụọ ọrụ na-eme ka o kwe omume n'ibelata ọrụ mmadụ. Akpaghị aka ajụjụ nwere ọtụtụ uru, gụnyere mgbe nile akara nke ajụjụ arụmọrụ, nke pụtara na-ekwe nkwa ziri ezi na kacha nta puru omume nke na-emehie. Akpaghị aka ajụjụ nke couriers ga-ekwe ka ị na-akpaghị aka na-eduzi niile usoro, ime obodo, gbakọọ ụgwọ, wdg N'ihe metụtara ahịa aza ajụjụ, usoro nwere ike na-akpaghị aka nyefee iwu ’data na nchekwa data, soro niile dị mkpa data. Enwere ike iji data a rụọ ọrụ ahịa iji chịkwaa ma melite ogo nke ọrụ enyere.
Mmemme mmemme dị iche iche na-enye gị ohere ịhọrọ nke kacha mma maka ụlọ ọrụ gị, na-echebara mkpa na ọchịchọ niile echiche. Ekwesiri ighota na mmemme akụrụngwa agha kwesiri iju ndi nile choro ma nwee oru nile di nkpa iji bulie ihe ndi ulo oru a. Ngwa USU-Soft bụ sọftụwia akpaaka nke na - ebuli usoro ọrụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla, n'agbanyeghị ụdị na ụlọ ọrụ ọrụ. USU-Soft bụ nke a na-ejikarị n'etiti ụlọ ọrụ ụgbọ njem na ọrụ ozi. Ihe dị iche iche nke usoro mmemme na-adabere n'eziokwu na mmepe ya na-eburu n'uche usoro ụlọ ọrụ ahụ, mkpa ya na mmasị ya. Mmepe na mmejuputa nke USU Software ka emere n’obere oge ma ọ chọghị ka ị kwụsị ọrụ gị ma ọ gaghị etinye ego na itinye ego ọzọ.
USU-Soft na-ebuli ọrụ ndị dị ka ịza ajụjụ na njikwa, ma na-emekwa ka o kwe omume ijikwa njikwa na-enweghị igbochi arụ ọrụ ọbụlagodi Maka nyocha nke ndị ozi, mmemme USU-Soft na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ndị dị otú ahụ na-akpaghị aka dị ka ịnọgide na-eme ihe omume dịka usoro ọrụ na oge nke ndị ozi, ijikwa ndị ozi, idekọ oge na ọsọ nke nnyefe nke onye ozi ọ bụla rụrụ, wdg. Maka ajụjụ maka ndị ahịa, a ga-ebufe usoro ọ bụla na nchekwa data ebe a ga-echekwa ozi nke ndị ahịa ọ bụla. Yabụ, ị nwere ozi niile dị mkpa maka nyocha azụmaahịa yana ịnweta nzaghachi n'aka ndị ahịa.
USU-Soft bụ ego kachasị mma n'ọdịnihu ụlọ ọrụ gị! Ọ nwere bibiri e mere interface na a dịgasị iche iche nke nhọrọ. Nwere ike ịmepụta njikwa nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ, gụnyere ndị ọrụ ubi. Ọ nwere oge etinyere etinyere, yabụ na ịmara oge ole ejiri were nyefee ya. Site na sistemụ ị nwere ike iwebata ọgbara ọhụụ nke ọrụ ndị ezipụ ozi na ịrụ ọrụ ka mma maka ịtụ ahịa, ndị ahịa na akụrụngwa. Ihe data dị na ndị ahịa nwere ike inyere gị aka ịme nyocha nyocha.
Ngụkọta akpaaka, nlekota ụgbọ na nsuso, nhọrọ akpaka nke ụzọ maka onye ozi bụ naanị atụmatụ ole na ole nke ngwa ahụ.
Anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị ike nke free ngosi version tupu n'ezie akwụ ụgwọ maka usoro ihe omume. Enwere ike ibudata ya na webụsaịtị anyị. Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ, ịnwere ike ịjụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ anyị mgbe niile ka ha gosi gị ihe ngosi iji hụ nke ọma ọrụ ọrụ sistemụ nwere yana otu ha si akwado mmepe nke nzukọ gị. Ngwa USU-Soft bụ ihe ama ama maka interface ya dị mfe yana kensinammuo, ekele nke ihe ọmụma akpaghị aka na-adị oke mfe ma dịkwa mfe mmụta. Njikwa a ga-abụ onye a tụkwasịrị obi, ọ ga-emetụta ma ọrụ na ngalaba ọ bụla, yana alaka, ọnụ, ụlọ nkwakọba ihe, nke dịpụrụ adịpụ site na etiti ụlọ ọrụ. Eziokwu bụ na sọftụwia ahụ jikọtara ndị niile sonyere na ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na netwọkụ ozi otu. Site n'enyemaka nke ọrụ nke nhazi oge, onye nduzi nwere ike site na mmefu ego ma jiri nlezianya nyochaa mmepe n'ọdịnihu. Ndị na-edekọ ọrụ ga-enwe ike ịhazi mgbanwe na oge ọrụ. Ọkachamara ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịgakwuru usoro iji kesaa oge ọrụ ya.